के कारण दिए टिकटकका सिइओले राजीनामा ? «
के कारण दिए टिकटकका सिइओले राजीनामा ?
प्रकाशित मिति : 27 August, 2020 12:27 pm
चिनियाँ स्वामित्वमा रहेको सर्ट भिडिओ एप टिकटकका प्रमख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) केभिन मयेरले रा’जीनामा दिएका छन्। एनबिसीन्युजका अनुसार पछिल्ला साताहरूमा देखिएको तीव्र राजनीतिक परिवर्तनका कारण आफूले रा’जीनामा दिएको मयेरले जनाएका छन्। मयेर डिज्नी छोडेर गत जुन १ देखि टिकटकको सिइओ बनेका थिए। चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटक पछिल्लो समय संसारभर युवा पुस्तामा लोकप्रिय भएको छ।
अमेरिका पनि यसको लोकप्रियता बढ्दो छ। लोकप्रियता बढेसँगै टिकटक अमेरिका र चीनबीचको रा’जनीतिक मु’द्दा बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकले प्रयोगकर्ताहरूका विवरण बेइजिङको सरकारलाई बुझाउने दाबी गर्दै यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ख’तरा भएको बताएका छन्।
उनले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई टिकटकसँग कारोबार नगर्न ४५ दिने अल्टि’मेटम दिएर कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्। टिकटकले ९० दिनभित्र अमेरिकी कम्पनीलाई स्वा’मित्व ह’स्तान्तरण नगरे प्रतिब’न्ध लगाउने ट्रम्पको घोषणा छ। अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियामा चलाउन माइक्रोसफ्ट र ओराकल कम्पनी टिकटकको स्वामित्व किन्न चाहन्छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूबीच सम्झौता भइसकेको छैन।